EMC UW S ỌREST
EMC Atụmatụ Atụmatụ
The dum usoro nke EMC na oru nkwado maka mbido imewe nke ngwaahịa nnyocha na mmepe, na-enye zuru ezu akwụkwọ imewe na oru documents.Provide na-na saịtị oru nkwado na ahaziri ngwaahịa ahaziri iji nyere ndị ahịa mma, na nkà mmụta sayensị na ezi uche uka mmepụta ngwọta.
Ọ nwere ike ịnwale maka CE, FCC, 3C na ọrụ ntinye akwụkwọ ndị ọzọ. Na ụlọ nyocha na-ejikwa akụrụngwa elektrọnik na-arụ ọrụ, nwere ike ịnwale ọtụtụ akụrụngwa akụrụngwa n'ihu.
N'ihi conduction, radieshon na ndị ọzọ na-anwale ihe gafere ọkọlọtọ nke ule sample na-atụ n'ihu mma aro na substantive ụzọ, countermeasure, aka ahịa iji belata nnyonye anya nke ngwaahịa, ka nweta nzube nke gafere ule.
EMC ụlọ nyocha ụlọ
Maka ule amụma mbụ nke ndị ahịa na mgbe ọdịda nke ule ahụ nwere ike ịgbazite ụlọ nyocha maka ndị ahịa maka ọtụtụ nyocha, enwere ike izipu ihe atụ ozugbo, ma ọ bụ ndị ahịa onwe ha bịara na saịtị ahụ ， biko mee oge tupu oge.
ESD electrostatic orùrù ule akụrụngwa
Ejiri mgbochi nnwale nnwale nnwale
log oge ufodu (30MHz-1GHz)
Nnwale nnwale ule (9KHz-3GHz)
Igwe ihe ntanetị sitere na redio (10Hz-26.5GHz)